Page3– तपाईको अनि हाम्रो आवाज
नेता गगनकुमार थापाले पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने गरी भएको निर्णयमाथि प्रश्न
July 10, 2021 Desk 1
नेपाली कांग्रेसका नेता गगनकुमार थापाले पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने गरी भएको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएका छन् । विदेशमा उपचार गरेको खर्च नव्यहोर्ने व्यवस्था कानूनमा हुँदाहुँदै निर्णय हुनु गलत भएको थापाले जनाएका छन् । सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेख्दै नेता थापाले आफूले नै विदेशमा उपचार गर्दा खर्च […]
भित्र वार्ता शुन्य, बाहिर प्रचार सकारात्मक
July 9, 2021 Desk 1
काठमाडौं । नेकपा एमालेभित्रको पार्टी विवाद समाधानको लागि गत सोमवारबाट निरन्तर बैठक बसिरहेको छ । कार्यदलका सदस्यहरुले मंगलवारबाट वार्ता सकारात्मक भइरहेको बताएका थिए । लामो समयपछि बुधवार पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच समेत भेटवार्ता भएको थियो । त्यसबाट पार्टी एकता हुनेमा […]
जसपामा सहमति नभएपछि अब के गर्छ निर्वाचन आयोग ?
July 6, 2021 Desk 1
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालमा देखिएको विवाद समाधानका लागि निर्वाचन आयोगले अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव पक्षसँग छलफल गरेको छ । तर छलफलमा सहमति नजुटेपछि दुवै पक्ष पार्टी विभाजित गराउन तयार भएका छन् । जसपासँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जसपा विवादको समाधान […]
July 4, 2021 Desk 1
July 3, 2021 Desk 1
काठमाडौँ- नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा दुई हजार ३२८ जना कोरोनाभाइरस संक्रमित थपिएका छन् । १० हजार १३३ जनाको परीक्षण हुँदा २३२८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको हो। सोही अवधिमा तीन हजार ०६६ जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै १९ जनाको मृ,त्यु […]
प्रधानमन्त्री ओली;‘अब भ्याक्सिन लगातार आउँछ’
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खो,प लगाउने अभियान नै चल्ने दावी गरेका छन् । शनिबार काठमाडौंमा त्रिशुली-प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको उद्घाटन कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले केही समय खो,प पाउन समस्या भए पनि मित्रराष्ट्रहरुसँगको संवादका कारण खोपमा देखिएको समस्या समाधान भएको बताए । ‘अब […]
थाइराइडका रोगीको संख्या पछिल्ला दिनमा बढीरहेको अध्ययनहरुले देखाएका छन् । भारतमा गरिएको एक अध्ययन अनुसार चेतनाको अभावका कारण यो रोगका पीडितको संख्या बढिरहेको छ । थाइराइडका कारण, स्वास्वासप्रस्वास, कोलस्ट्रोलको समस्या, डिप्रेसन, डायविटीज, इसोमनिया तथा मुटाका बिरामीको खतरा बढेको छ । चिकित्सकहरुका अनुसार खानपानमा ध्यान नदिँदा थाइराइड बढ्दै जान्छ […]
ओलीलाई नेपालले तपाईको फोन उठाउन मन थिएन भनेपछि…
July 2, 2021 Desk 1
काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूले पटक पटक वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई भेट्न चाहे पनि समय नदिएको गुनासो गरेका छन् । आज एमालेको १३ औँ केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोल्दै ओलीले आफूले पार्टी एकताको विषयमा कुरा गर्न चाहे पनि नेपालले कुरै गर्न नचाहेको गुनासो गरे । बैठकलाई […]
आजबाट प्रधानमन्त्री तर्फका कानून व्यवसायीको बहस सकिँदै
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा आज पनि सरकारी पक्षका कानून व्यवसायीहरुले निरन्तर बहस गर्दैछन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तर्फका कानून व्यवसायीहरुलाई छुट्याइएको समय मध्ये अब कुल १ घण्टा ३० मिनेट समय बाँकी रहेको छ । जसमा १३ जना कानून व्यवसायीहरुले बहस गर्ने समय पाएका छन् । आज […]
‘प्रधानमन्त्रीले कुनै विकल्प नदेखेपछि संसद विघटन गर्नुपर्‍यो’;अग्नि खरेल
July 1, 2021 Desk 1
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ । सोमवारबाट सरकारी पक्षका कानून व्यवसायीहरुले बहस गरिरहेका छन् । यसैक्रममा आज शुरुवाती चरणमा बहस गर्दै पूर्व महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै विकल्प नरहेको कारण संसद विघटन गर्नुपरेको जिकिर गरेका छन्। “७६(२) को […]
एमाले स्थायी कमिटीमा थपिए ८ सदस्य ,को को थपिय नामावली सहित
June 30, 2021 Desk 1
नेकपा एमालेले स्थायी कमिटीमा ८ जनालाई मनोनयन गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधवार बसेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकले पूर्व माओवादी खेमाका ४ र एमालेतर्फका ४ जनालाई स्थायी कमिटीमा मनोनयन गरेको हो । यसअघि एमाले स्थायी कमिटीमा नरहेका तर नेकपा क्रियाशील रहेको समयमा स्थायी कमिटीमा रहेका रामबहादुर थापा, […]
शुरु भयो एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक
काठमाडौं । नेकपा एमालेको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी अन्तिम बैठक बालुवाटारमा शुरु भएको छ । बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक करिब १ घण्टा ढिला गरि शुरु भएको हो । आजको बैठकले पार्टीलाई जेठ २ कै अवस्थामा फर्काउनेबारे निर्णय गर्ने बुझिएको छ । आजको बैठकमा वरिष्ठ नेता […]
June 29, 2021 Desk 1
प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना
June 28, 2021 Desk 1
काठमाडौं । आज देशभर सामान्य देखि पूर्ण बदली रहनेछ । आज देशका केही स्थानहरुमा हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । प्रदेश नं १ र गण्डकी प्रदेशका एक वा दुई स्थानहरुमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाको भनाई छ । हाल देशभर मनसुनी वायुको […]
बेल्जियम र पोर्चुगलबीचको खेल आज : कसले मार्ला बाजी ?
June 27, 2021 Desk 1
युरोकपको राउन्ड अफ १६ मा आइतवार निकै महत्त्वपूर्ण प्रतिस्पर्धा हुन गइरहेको छ । स्पेनको सेभिलमा बेल्जियम र पोर्चुगलबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । बेल्जियमले यस प्रतियोगितामा अहिलेसम्म सबै खेल जितिसकेको छ भने पोर्चुगल साबिक विजेता हो । बेल्जियमले ग्रुप चरणमा सबै खेल जितेर उच्च उत्साह कायम राखेको भए पनि पोर्चुगल […]